Kusvira mukadzi weshamwari yangu Nyoro kuLake!!! – Makuhwa.co.zw
Kusvira mukadzi weshamwari yangu Nyoro kuLake!!!
Nyoro paRwizi nemukadzi weshamwari yangu!!! Makadini hamawe ndauyawo nenyaya yangu, zita ndinonzi Lloyd ndoshanda saEngineer kuZesa. Ndine shamwari yangu anonzi Malvern toshanda tese and most of the times we hang out together. We meet once in a while to drink and play darts paLocal bar. He is married and i am divorced saka vanogara vachindiseka kuti i am a moving time bomb nenyere.
Related Topics:Kusvira mukadzi weshamwari yangu Nyoro kuLake!!!
Masviriro Andakaita Mukadzi Ane maCurves nemaZizamu mahombe!
Dickson mukomana weZIMBORO – Airemerwa nemboro yake!